Ka faa'iideyso caafimaadka dadka oo dhan lana hubiyo badbaadada cuntada, bulshadana looga faa'iideysto.
Shanghai Chuangkun Biotech Inc. waa adeeg bixiye ku takhasusay adeegyada baaritaanka hidda-wadaha iyo amniga cuntada / daaweynta POCT ee xallinta ogaanshaha molikalka. Aasaasayaasha aasaasiga ah ee shirkaddu waa hawl wadeenno sare iyo shaqaale farsamo asaasi ah oo ka socda shirkado waaweyn oo ku hawlanaa IVD ama warshado la xiriira in ka badan 10 sano. Waxay leeyihiin caymis dhameystiran oo ka socda R & D, suuq ilaa iib, waxayna leeyihiin khibrad warshad hodan ah. Jihada ganacsiga ee ugu weyn shirkaddu waxay leedahay rajo suuq oo ballaadhan, teknoolojiyaddeeduna waa mid horseed u ah tartanna leh.
Waqtigan xaadirka ah, alaabada ugu weyn ee shirkadu waa mashruucyada tijaabinta hiddo-wadayaasha indhaha iyo badbaadada cuntada / caafimaadka POCT badeecooyinka lagu ogaado dhaqsaha, kuwaas oo ah badeecooyin tijaabo ah oo ajnabi ah ama aalado leh hoggaamiyeyaal caalami ah iyo tikniyoolajiyad asaasi ah. Shanghai chuangkun bayooloji ahaan, iyadoo ah wakiilka guud ee Shiinaha, ayaa mas'uul ka ah kor u qaadista, horumarka, iibka iyo shaqada iibka kadib ee suuqa Shiinaha. Aragtida shirkaddu waa inay soo bandhigto tikniyoolajiyadda ajnabiga ah ee horseedda wax soo saar tayo sare leh iyo dhufto, sii wanaajinta iyo fidinta horumarka, jabinta suuqa ballaaran ee Shiinaha, si dhow ula shaqeysa wadiiqooyin kala duwan, wakiilo iyo macaamiisha dhammaada, ku guuleysato iskaashi guul-wadaag ah iyo raadinta horumar guud, si alaabada tijaabada-dhamaadka sare iyo madal tiknoolajiyadeed ayaa lagu dabaqi karaa oo door ka ciyaari karaa suuqa kormeerka Shiinaha.
Macaamiisha iskaashatada ugu weyn ee shirkaddu waa jaamacadaha iyo machadyada cilmi-baarista sayniska, xarumaha baaritaanka caafimaadka ee saddexaad, shirkadaha baaritaanka baaritaanka molikalka ee IVD, shirkadaha cuntada, xarumaha gobolka iyo degmada ee xakamaynta cudurrada, kormeerka suuqa iyo maamulka, kormeerka ka bixitaanka soo-galootiga iyo Xafiiska Karantiiniyada, iwm. Bayoolaji chuangkun bayoolaji waxaa ka go'an sameynta tikniyoolajiyadda baaritaanka cusub ee molikalka ay ka faa'iideysato caafimaadka dadka oo dhan, hubiso badqabka cuntada iyo ka faa'iideysiga dadweynaha.
Loo heellan yahay adeegsiga tikniyoolajiyad cusub oo lagu baaro kelli si loo hubiyo badbaadada cuntada, looga faa'iideysto caafimaadka dadka oo dhan, loo abuuro dadweyne!